Agagaaraha Best In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Agagaaraha Best In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel
khamri Booqashada gobollada in Europe waa riyo, waayo, connoisseur khamri kasta. canab ah Stunningly fiican, cimilada diiran oo qoraxdu, hillsides faraxgelinta, iyo cunto fiican u qeexaan, kuwaas oo gobollada top khamri. Haddii aad tahay lover oo khamri ah iyo rabto inaad aragto Best agagaaraha In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel, Save A tareenka kaa caawin doona inaad halkaas tagto!
Akhri si aad u ogaato waxa Europe leeyahay in ay bixiyaan khamri ku caashaqay. Waxaan sharad aad hore u buuxiyey oo lahaa in aad maskaxdaada ka hor ku dhameysteen this article!
agagaaraha ugu fiican Yurub: France
gobolka champagne, France
Qaar ka mid ah ugu caansan iyo agagaaraha ugu fiican Yurub waxaa laga helaa champagne. Waa caga fiican safarka maalinta ka a Paris, laakiin waxaa jira guryo badan Champagne si ay u sahamiyaan in labada Reims oo Epernay, halkaas oo aad ka heli doontaa magacyada haybadda sida Veuve Clicquot iyo Tattinger. Gobolka Champagne ayaa waxaa dhawaan loo magacaabay a site UNESCO Heritage World, taas oo barbaro weyn ee dalxiiska goobta, ay la socdaan hillsides rogid qurux badan ka buuxa beero canab ah.
Paris si ay Tareenadu Nancy
Metz in Tareenadu Paris
Nancy in Tareenadu Paris
The gobolka khamri Valley Rhone ayaa u badan in ay bixiyaan ka dhaqan a dhibic of view la Lyon isagoo mid ka mid ah Meelaha Heritage UNESCO World. Iyada oo ay sahlan, hudheellada dhab ah, Rhone waa samada lover khamriga ee la raagay caan ah oo quraadda Hermitage, Cote-Rotie iyo Chateauneuf-du-Pape dalxiisayaal khamri ay barbaro galeen oo dunida ku baahsan.
Ha dareemin cabsi haddii aad raadineyso weeyna kaliya waqti wanaagsan la saaxiibada qaar ka mid ah in kastoo! Laga soo bilaabo bilowga ah khubaro, Rhone ah runtii mid waa in lagu daro liiska. Halkan daraysid ah meelaha ay aadaan oo waxaas oo si aad u aragto.
Lyon ilaa Provence by Tareenka
agagaaraha ugu fiican Yurub: Tuscany, Italy
The agagaaraha Tuscany bixiyaan dalka khamri kaamil ah waayo-aragnimo. Kaliya maaha Tuscany qaar kamid ah Talyaanigu magacyada ugu caansan, sida DOC cusub Val d'Orcia, Vino Nobile di Montepulciano, gobolka waa inay Cadha daraadeed kibirka, jacaylka ee dalka, iyo farxad aad u weyn oo ah dadka wax la wadaago.
Haddii aad lahaa halkii aan qorsheeyo adiga kuu gaar ah khamri Tuscany safar, you can rely on the expertise of a guide or driver. We usually jeexjeexay baabuur oo waxay samayn nafteena, laakiin waxaan sameeyey qabto darawalka gaarka ah ee Montalcino oo hareerahayga noo qaatay joogsiga pre-qorsheeyay our. Waa hab fiican si ay u tagaan haddii you`re ka walwalsan wadista aagga ama aad rabto inaad cabbaan khamrigii halkii ay ku candhuufay.
Waxaad ballansan kartaa safar ka hor. Waxaan u maleynayaa in ugu fiican si ay u tagaan la safar gaar ah, sidan oo kale Montepulciano safar, Montalcino safar, ama Chianti safar ka Viator.
tip: Waxaan sidoo kale heer sare ah u soo jeedin ku daray qado winery ah in qorshayaasha aad maalin kasta. raagay Tuscan waxaa loogu tala galay in lagu riyaaqay la cuntada.
agagaaraha ugu fiican Yurub: Mosel, Germany
Dhamaanteen waan ognahay Germany ay biirka iyo baabuurta, laakiin ilaa hadda, we didn’t know that they have a kick-ass wine region too.
Inta u dhaxaysa Koblenz oo soohdintu waxay si Luxembourg been gobolka ugu da'da weyn Germany ee khamriga. horeba, Romans arkeen ka iman micro-cimilada diiran oo ciidda nafaqo-hodan. maanta, the vineyards of the Moselle region produce some of the world’s best Rieslings.
Waxaa jira dhowr ah oo uu ka soo xusho, laakiin ugu sareysa ee liiska our waa Weingut Willi Schaer. A beerta canabka ah u yar in taariikhda in ay dib ugu 1121. Schafer The qoyska inta badan ku tiirsan ay dareen tababaran ee dhadhanka iyo dareen mindhicirka marka ay timaado in la go'aaminayo waqtiga ugu fiican in ay goosato qayb kasta oo geedahoodii canabka ahaa. Oo aynu u malayno waa badass!
qoyska si gaar ah saarta Riesling ay 4.2 hektar oo dhul ah oo waxaa lagu gartaa dheelitirka kaamil ah inta u dhaxaysa ashitada iyo qaab-dhismeedka. The khamri raagay oo adag-marsiiyey ayaa lagu qaybiyey aduunka oo dhan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku dhadhamiyaan khamrigii on-site, hubi inaad ballan hore.
Cologne si Tareenada Bonn
Bonn in Tareenadu Koblenz
Koblenz in Tareenadu Bingen
Bingen in Tareenadu Frankfurt
agagaaraha ugu fiican Yurub: Lavaux, Switzerland
viticulture geesinimada: Waa weedh inta badan ka shaqeeya si ay u sharxaan beeraha ee Bbc adag. Lavaux, Switzerland is a region that exemplifies the concept perfectly.
Lavaux waa khamri -Gobolka sub ee Vaud, ku taal xeebaha waqooyi ee Lake Geneva, Switzerland. Goobtani waxa ay, oo degan meel mabsuud on qeybta bari ee gudubno, waxaa loo yaqaan soo saarka cad steely raagay, inta badan ka canab Chasselas ah.
Marka ugu horraysa ee aad indhahaaga dejin terraces ay uga yaacday, aad ku dhuftay by dowlda oo dhan of. (Gaar ahaan boostada dhowr sibraar oo khamri ah). aqoonsan by UNESCO sida a Heritage Site Adduunka, dhanka qorrax ka soo barakeeyey this ee Lake Geneva jeesasho meel ekayd ee balakoonka ubax buuxiyey, birqayso biyaha buluug in kaliya la sii kaamileen karaa hal galaas oo Chasselas degaanka. Sidoo kale, sirqoollada ay u gudubno-siinta xumaada ee xad-dhaaf ah slants that only a mountain goat and team should harvest.
Inta lagu jiro qarnigii 11-, kuwaas hillsides badan iska Benedictine iyo Cistercian Biyac. Waxay ahayd suufiyadoodii kuwaas oo soo jeediyey aagga hore kaymaha galay canab ah wax soo saar leh in ay dhacdo in ay leeyihiin Vistas xaadha.
Tani waa hortiisa daaqada tareenka on hab si Lausanne:
Magaalada Lausanne waxaa si fiican u taalaa hal dhammaadka Lavaux. Waxay ka dhigaysa mid ah nuqdad fiican in sahaminta gobolka. Muddo Switzerland, Lausanne run ahaantii waa milkiilaha inta badan marka ay timaado beero canab ah. (bulsho leeyahay gobolka khamri kordhaya a ma ka yar 62 beeraha kubada cagta, kor u soo saara ilaa 400’000 dhalooyinka sannad kasta.)
Dib bacaha iyo ka qaadaan aad muraayad. Waa wakhti ay ku tareen ama laba si aad u eegto Best agagaaraha in Europe. Save A tareenka ku siin doonaa tigidh lacag la'aan ah oo degdeg badan kaaftoomi lahayn ajuurada qarsoon. Maxay yihiin hadalladan aad sugayso? Time si aad u hesho khamri, on!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog Best agagaaraha In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel gal goobta? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-wineries-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#EuropeWine #TrainandWine #wineries #winetasting #winetastinginEurope europetravel khamri winetour
Sidee Si aad u qorshayso Trip A Si Europe